माया कुनैपनि समयमा, कुनै पनि बखतमा : अनुप–दिया - Seto Parda
मान्छेले चाहेर नचाहेर पनि परिस्थितीले डोर्‍याएको हुन्छ । कतिपय कुरा गर्दा अमुर्त जस्तो लाग्न सक्छ, तर के हो भने तपाई भावनालाई लगाम लगाउन सक्नुहुन्न । कलाकार यसै पनि भावनामा बहकिने हुन्छन् । पहिलेको बिहे र अहिलेकोमा आ–आफ्नै गुण छन् । त्यहाँ गरेको गल्ती यहाँ सायद नहुन सक्छ । त्यसैले यी मेरालागी भिन्दाभिन्दै यात्रा हुन् । फेरि त्यसबेला मैले खासै गल्ती गरेको जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो । गल्ती भनेकै हामीले दूरी राख्नु हुन्थेन । नत्र हामीबीच अरु असमझदारी पनि केही हैन । झगडा गरेको पनि हैन । जिवनमा जब चिसोपना आउन थाल्छ, जोडिदैन ।
अनुप बराल रंगमन्चहुँदै फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरे । ‘फिटकिरी’ उनी निर्देशित पहिलो फिल्म हो भने यतिबेला ‘दोख’ छायांकन क्रममा छन् । दिया मास्के पनि अनुपलाई गुरु मानेर रंगमन्चहुँदै फिल्म अभिनयमा छिरिन् । कला यात्रामा साथसाथै हिंड्दाहिंड्दै अनुप–दियाको माया बस्यो र बिहेमा परिणत भयो । दुईको सहयात्राबारे सेतोपर्दा टिमले गरेको कुराकानी :
तपाई दुईबीच प्रेम कति समयसम्म चल्यो ? जून प्रेमले विवाहसम्म डोर्‍याएर ल्यायो ?
अनुप : आठवर्ष । यसबीचमा सम्झन लायक घटना धेरै रहे । त्यसमा पनि एउटा सम्झनु पर्दा, ‘दलन’ सिरियलका लागि कास्टिंग गरिरहेका थियौं । त्यसक्रममा काली भन्ने चरित्रलाई निर्वाह गर्न सक्नेको खोजीमा थियौं । उसको स्वभाव स्ट्रेट फरवार्ड, हेर्दाखेरी छुच्ची छुच्ची लाग्ने तर भित्र मनबाट असल मनकी । कसैले मलाई आलोक नेम्वाङको म्युजिक भिडियो ‘भिज्यो सिरानी रातमा’ खेल्ने युवती तपाईले खोजे जस्तै हुनसक्छ भन्यो । सिरियलको निर्देशक नवीन सुब्बा हुनुहुन्थ्यो । म कास्टिंग डाइरेक्टर मात्रै थिएँ । दुवै जनाले भेट्यौं । नवीनजी ले लामो स्टोरी सुनाउनु भएपछि भन्नुभयो, ‘तपाई वर्कशपमा आउनु हुन्छ ?’ त्यसपछि उनले ‘खै तपाईले भनेको त मैले केही पनि बुझिनँ । तर पनि म वर्कशपमा आउँछु’ भनीन् । तर नवीनजीलाई उनले एक्टिंग गरेर खाँदैन भन्ने लागेछ । तर पनि मैले भनें, ‘एक पटक हेरौं न । हाम्रो क्यारेक्टरलाई त यस्तै स्ट्रेट फरवार्ड चाहिने हो । के थाहा भईहाल्छ की ?’ त्यसपछि वर्कशपमा बस्यौं । त्यहीं नै पहिलो परिचय भयो ।
दिया : अहिले अनुप सरले भनेका कुरा सुन्दा मलाई पनि त्यही क्षण दिमागमा भिजुअलाइजेसन भएर आयो । तर त्यो त प्रेम हुनुभन्दा अघिको कुरा भयो नी त । प्रेमपछिको याद रहने साना साना चीजहरु जस्तो : अनुप सर बसुन्धरा बस्नुहुन्थ्यो, म पाटन पुल्चोकतीर बस्थें । उहाँ रिंगरोड घुम्ने लामो बसको ब्याकसिटमा राखेर मलाई पुर्‍याउन जानुहुन्थ्यो । फर्किंदा ट्याक्सीमा जानुहुन्थ्यो वा बसमा त्यो भने मलाई थाहा भएन । ती पलहरु बिताउँदा साह्रै रमाइलो हुन्थ्यो । ठूलो रेष्टुरेन्टमा नजाने बरु साना जहाँ कसैले पनि नचिन्ने भएकोले त्यस्तोमा जान्थ्यौं । त्यो पलहरु चाहीं याद आउँछ ।
दुवै व्यस्त । बिबाहपछि चाहीं माया, प्रेमका लागि कत्तिको समय पाउनु भएको छ ?
अनुप : माया भन्ने चीज व्यस्तताका बीच पनि गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ । त्यसको लागि अलग्गै समय निकालेर प्रेम बाँड्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन । माया कुनैपनि समयमा कुनै पनि बखतमा गर्न सकिन्छ । फेरि हामी त अधिकांश समय सँगै नै बिताईरहेका हुन्छौं । त्यो भन्दा बढि के अपेक्षा गर्नु ? काममा सँगसँगै हुँदा खेरी जसरी एकअर्कालाई मद्दत हुन्छ, त्यो नै सबैभन्दा ठूलो माया हो जस्तो मलाई लाग्छ ।
बिहे अघि केटाहरु आकाशकै तारा झारुँला जस्तो गर्छन् रे । बिहे पनि उहाँमा केही फरक पाउनु भएको छ ?
दिया : छैन । खै मलाई त त्यस्तो फरक आएको जस्तो लाग्दैन व्यक्तिगत रुपमा । तर परिवार पनि जोडिएपछि अब दुई परिवार भएको छ । त्यसप्रतिको उत्तरदायित्व छ । त्यसबाहेक बाँकी कुरा त त्यस्तै हो ।
गुरु–चेलीको सम्बन्ध पति–पत्निमा बिस्तारित हुँदाको भिन्नता चाहीं ?
दिया : पहिले भिन्न ठाउँ, भिन्न घरबाट काममा आइन्थ्यो भने अहिले सँगै बसेर सँगै आउने जाने भएको छ । झन् बढि समय सँगै बिताउन पाएका छौं । अरु फरक त खै । तपाईलाई केही लागेछ ?
अनुप : मलाई लागेको चाहीं के हो भन्दाखेरी पहिले समाजले पनि हामीलाई गुरुचेलीकै सम्बन्धले चित्रित गरेको हुन्थ्यो । निश्चित उमेरका कारण पनि दियाको आफ्नै सर्कल छ भने मेरो आफ्नै छ । अहिले उसका साथीहरुले मलाई के भन्ने ? सर वा भिनाजु ? यस्तो समस्या चाहीं हुँदोरहेछ । पत्नि भईसकेपछि उनैलाई पनि पत्नि भएर कुरा गर्ने वा स्टुडेन्ट भएर कुरा गर्ने भन्ने अप्ठ्यारो परिरहन्छ ।
गुरु त आइडियल हुन्छन् । त्यस्ता व्यक्तिसँग प्रेम कसरी सम्भव भयो ?
दिया : आइडियल मान्छेसँग प्रेम सम्बन्ध झन् छिटो हुन्छ जस्तो लाग्छ । मैले अरुमा पनि देखेको छु, यदि एउटा शिष्य आफ्नो गुरुलाई भित्रैबाट मान्छ भने एक किसिमको प्रेम रहन्छ नै । त्यसरी नै धेरै सिक्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । अरु प्रेम भन्दा त्यो भिन्न र अझ राम्रो परिस्कृत हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
पहिलो पटक गुरुसँगको प्रेम महसुस हुँदाको क्षण कस्तो लाग्यो ?
दिया : अब गुरुलाई प्रेम गर्दिनँ भन्ने सोच त थिएन । भित्रबाट प्रेम पलाईसकेको थियो । मलाई त गुरु हुनुभन्दा अघि देखि नै राम्रै लाग्थ्यो । त्यो पल, अरु केही सोचिएन । बस् मन पराउँछु भन्ने मात्रै भयो । गुरुसँग प्रेम गर्नु हुन्छ वा हुँदैन भन्ने सोच नै आएन । बिहे गरेपछि चाहीं बरु गुरु पनि हो है भन्ने फिलिंग्स आयो तर प्रेम हुनेबेला चाहीं त्यस्तो फिलिंग्स मलाई चाहीं आएन ।
प्राय:ले विवाहपछि पत्निलाई घरमै सीमित गर्छन् । तपाईले त दियाको कामलाई निरन्तरता दिन सघाउनु भयो ।
अनुप : सायद म आफैं पनि कलाकार भएर होला । कलाकार भनेको स्वतन्त्र हुन चाहने, खोज्ने मान्छे हो । निश्चित नियम र परिधीमा बाँधिएर बस्न सक्ने मान्छे सायदै कलाकार बन्न सक्छ । जो आफैं यो क्षेत्रमा संघर्ष गरिरहेको छु, अर्को यसै क्षेत्रमा लागिरहेको मान्छेलाई बन्देज लगाउनु भनेको सबैभन्दा ठूलो क्राइम गर्नु हो जस्तो लाग्छ । त्यस हिसाबले पनि कामको निरन्तरता दिनुपर्छ भनें र उनको इच्छा पनि त्यही थियो । हामी दुईलाई जोड्ने कडी पनि त्यही थियो । हामी कामलाई माया गर्ने मान्छे, यही कुरा नै छुट्टियो भने सायद हामीबीचको रिलेसनशिप पनि बिस्तारै टाढिने संभावना रहन्छ ।
दिया : सिक्ने र सिकाउने सम्बन्ध सायद प्रेम भन्दा ठूलो हुन्छ । त्यसैले पनि हामीमा यो रहिरहन्छ ।
अन्तरजातीय विवाह गर्दाका फाइदा र बेफाइदा के पाउनु भयो ?
अनुप : मलाई त खासै केही फरक परेन । समाजले पनि ब्राम्हणलाई उच्च कुलको भन्छ । दियाको घरमा जान पनि मलाई एकदमै सजिलो छ । मेरो घरमा चाहीं निश्चित खालका केही अप्ठ्यारो, व्यवधान थियो । आफ्नै घरकाले नचाहेपनि समाजले के भन्छन् भन्ने डर उहाँहरुमा थियो । राम्रै चीज हुँदाहुँदै पनि नराम्रो दृष्टिकोण हुनसक्छ मान्छेहरुमा ।
दिया : सम्बन्ध राम्रो र सफा भईरहेको हुन्छ । तर अरुले त्यसलाई नराम्रो तरीकाले लिईदिन्छ । अझ साह्रै नराम्रो लाग्ने त जथाभावी छापिने समाचारले गर्दा रहेछ ।
तपाई कास्टिंग डाइरेक्टर वा डाइरेक्टरका रुपमा संलग्न भई गरेका काममा प्राय: दिया छुट्नु हुन्न । यस्तो कसरी संभव हुन्छ ?
अनुप : फिल्मको सुरुवात मैले कास्टिंग डाइरेक्टरबाटै गरें । अहिले निर्देशन गर्दा होस् वा कास्टिंग गर्दा, पहिले म चरित्रको आउटलुक्स कस्तो छ ? चरित्रको हाउभाउ, आनीबानी कुन अभिनेतासँग मिल्छ भनेर खोज्छु । अर्को तरीका, जून कलाकारमा एकदमै क्षमता छ र उसको अभिनय गर्ने सामथ्र्यले चरित्रको भित्रै छिर्न सक्छ भने बाहिर गएर पनि कास्टिंग गर्छु । धेरैलाई लाग्दो हो, आफ्नै श्रीमतीलाई बनाउँदो रहेछ । तर मलाई त्यस्तो हैन जस्तो लाग्छ । दियालाई नजिकबाट बुझ्ने भएकोले उसले यस्तो गर्न सक्छ भनेर कास्टिंग गराउँछु ।
दिया : अनुप सरले कास्टिंग गरेका धेरै फिल्म छन्, जसमा म कास्ट भएको छैन । मान्छेलाई त्यो थाहा छैन । तर जे देखिन्छ, कुरा त्यसैमा हुन्छ । नत्र मुश्किलले म दुई फिल्ममा कास्ट भएकी हुँला, १० वटामा छैन । त्यस्तो धेरै छ । र, अनुप सरले धेरै फिल्म बनाउनु भएको छैन । कति बनाउन बाँकी नै छ । त्यसमा म नहुन पनि सकुँला । नाटकमा चाहीं अनुप सरले जति पनि नाटक गर्नु भयो, त्यसमा सबैभन्दा कम भुमिकामा देखिने पनि मै हुँला । सायद चलेका नाटकमा म भएर पनि यस्तो सोचिएको हो की जस्तो लाग्छ ।
अनुप सर मायालु पति की राम्रो निर्देशक ?
दिया : दुईटै हो । म त्यस्तो छुट्याउन सक्दिनँ । यी दुवैभन्दा उहाँ अझ राम्रो एक्टर हो । पतिका रुपमा उहाँ एकदम केयरिंग गर्नुहुन्छ । साना साना कुरामा हेल्प गर्नुहुन्छ । खाना बनाउनेदेखि घरको सरसफाई गर्नेसम्म एकदम हेल्पफुल हुनुहुन्छ । आफुले सक्ने काम गरिदिनुहुन्छ ।
तपाईलाई दियाका कस्ता बानी राम्रा लाग्छन् ?
अनुप : धेरै बानी राम्रा छन् । मनमा कुरा राख्दिनन् । स्ट्रेट फरवार्ड छिन् । मैले भनेका कुराले मान्छेलाई दु:ख पर्ला वा राम्रो लाग्ला भन्ने सोचेर बनाएर भन्ने बानी छैन । सोझोपन र सरलपना सबैभन्दा राम्रो छ । त्यसबाहेक झ्याप्प रिसाउने, भन्दिहाल्ने रीस चाहीं अलि कडै छ । तर त्यो धेरै समय रहँदैन ।
तपाईको पहिले पनि लभ म्यारिज भएको थियो । त्यो कसरी छुट्यो ?
अनुप : माया प्रेममा सकेसम्म दूरी नभएकै जाती जस्तो लाग्छ । हाम्रो संस्कारको कुरा पनि होला, दूरी पनि होला । दूरीले मान्छेको जिवनमा भ्याकुम बनाउँदै लैजान्छ । बिहे गरेर लामो समय अलग अलग बस्नुभयो भने यस्तो हुन्छ । यो कुरा सबैमा लागू नहुन पनि सक्छ । कति जिवन पर्यन्त मायाका लागि कुरेर बस्ने पनि हुन्छन् । तर समझदारीको तह दुवै पक्षबाट हुनुपर्छ । कतिबेलासम्म कुर्ने हो भन्ने हुनुपर्छ । हामीबीच खाली भएको स्पेस सायद अरु चीजहरु आएर भरिंदै जान थाल्यो । खाली ठाऊमा अरु चीजको विस्तार भएको तपाईलाई थाहै हुँदैन । मेरो जिवनमा मिस भएको चीज त्यही हो । मैले पनि माया गर्छु । मेरो छोरी छन्, १४ वर्षकी । हामी एकअर्कालाई यी सबै थाहा छ । म विवाहित हुँ भन्ने पहिले नै दियालाई थाहा थियो । र, हामी एकअर्का प्रेममा थियौं भन्ने मेरो पत्निलाई पनि थाहा थियो ।
तपाईलाई अनुप सर विवाहित हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा केही फरक पर्‍यो ?
दिया : जब मन पराउन थालें, त्यो बेला मैले अधिकार खोजेको थिइनँ । केवल माया गर्छु भन्ने मात्रै थियो । त्यसैले पनि त्यो थाहा पाउँदा त्यस्तो केही भएन । तर उहाँको अनकन्डिसनल लभ त हो नै, मलाई उहाँ जस्तो क्षमतावान गुरुसँग सिक्ने भोक थियो । अरु कुरा भन्दा यो नै मेरा लागि ठूलो थियो ।
अब फेरि मायामा हुनुहुन्छ । पहिलेका गल्ती अब दोहोरिदैनन् भन्नेमा सजग हुनुहुन्छ ?
अनुप : मान्छेले चाहेर नचाहेर पनि परिस्थितीले डोर्‍याएको हुन्छ । कतिपय कुरा गर्दा अमुर्त जस्तो लाग्न सक्छ, तर के हो भने तपाई भावनालाई लगाम लगाउन सक्नुहुन्न । कलाकार यसै पनि भावनामा बहकिने हुन्छन् । पहिलेको बिहे र अहिलेकोमा आ–आफ्नै गुण छन् । त्यहाँ गरेको गल्ती यहाँ सायद नहुन सक्छ । त्यसैले यी मेरालागी भिन्दाभिन्दै यात्रा हुन् । फेरि त्यसबेला मैले खासै गल्ती गरेको जस्तो पनि लाग्दैनथ्यो । गल्ती भनेकै हामीले दूरी राख्नु हुन्थेन । नत्र हामीबीच अरु असमझदारी पनि केही हैन । झगडा गरेको पनि हैन । जिवनमा जब चिसोपना आउन थाल्छ, जोडिदैन ।
पहिलेको दुरीलाई दियाजीको आगमनले पुरिदिएको हो ?
अनुप : होला । त्यसलाई नकार्न पनि सकिंदैन । मैले अनुराधासँग नपाएको चीज दियामा भेटें होला । नत्र अर्को मान्छेको प्रश्नै उठ्दैनथ्यो होला ।
अब त निश्चित उमेर पनि घर्किन लागिसकेको छ । यो सम्बन्धबाट पनि सन्तानको माग होला । योजना के छ ?
अनुप : छ । अहिले ‘दोख’ फिल्म गर्दैछु । त्यो सकौं पहिले । उनी कास्ट पनि हुन् । अहिले त्यसैलाई कुरेर बसेका हौं । दियाको इच्छा पनि त्यही हो । प्लानिंग छ ।
अन्त्यमा, तपाईहरुलाई आफ्नो सम्बन्धका बारेमा भन्न मन लागेको केही छ ?
अनुप : रमाइलो त, मान्छेहरु प्रपोज गरेर लभ गर्छन् । तर हाम्रो बीना प्रपोज शुरु भएको लभ यहाँ सम्म आईपुग्यो । कसैले प्रस्ताव राखेन । तर पनि नभेट्दा कहिले भेटौं जस्तो अनि भेटेपछि छुट्टिन नपरे हुन्थ्यो जस्तो हुने । हामीलाई कुनै भ्यालेन्टाइन्स डे पर्खिनु परेन । न रातो गुलाब न कार्ड नै आदानप्रदान गरियो । बरु नजिक भएपछि बर्थ डेहरुमा वीस गर्ने चलन चाहीं बढ्यो ।
Tags: Anup Baral Deeya Maske Interview Theatre
Previous कफी खाएर बिहे गरेको हुँ : खगेन्द्र लामिछाने
Next स्वयं रेखा नै मेरो प्रतिष्पर्धी हो : रेखा थापा